Outdoor Modular akatungamirira Screen
Outdoor Front Service akatungamirira Screen
Indoor Fixed akatungamirira Screen
Custom akatungamirira Screen
How kusarudza High Power akatungamirira Matochi?
Akatungamirira vakawanda yakakurumbira okuvhenekesa nharaunda kuva, nokuti simba okuponesa, rinogona kwemamwe maawa pasi chete simba zvinodya, saka paro kwazvo zvakanaka nokupenya chiedza. Uye sei kusarudza furashiraiti chakanaka zvikuru nehanya nevanhu vanoda kutenga akatungamirira furashiraiti. 1. akatungamirira uwandu: kwakaita nhamba hove dzakawanda ...
Zvokungwarira panguva zvakatungamirira okuchengetera uye kushandiswa
Akatungamirira inonyatsoziva chaizvo zvemagetsi zvinoriumba, saka anofanira kungwarira chaizvo panguva kuchengetwa uye kushandiswa, zvikasadaro zvichaita kuti nyorova akatungamirira, ponji kana rufu. Uye yakawanda dambudziko LEDs chete anogona kuwanikwa panguva kushandiswa. Storage: 1. mwando uchapupu uye Anti-electrostatic pasuru nounyoro absorbent naye ...
Ndezvipi fefeta mwero uye muviri kwakadaro?
The fefeta zvazvingava ndiyo kangani chiratidzwa mufananidzo iri repainted kana ndivandudzwe pasekondi yoga yoga. Sezvazvakanyorwa chinoreva kakawanda mumwe kwacho, kuti fefeta mwero runoratidzwa Hertz. Kureva, mumwe fefeta yevanhu 75 Hz zvinoreva mufananidzo iri yakavandudzwa 75 nguva imwe wechipiri. Rakajairika matsva prices nokuti ...
Chii Ongororo nzira kuti akatungamirira Screen?
The kushanda pakuvheneka kwadzinoita akatungamirira kuratidza akavhiringidza vanhu vazhinji, chii zvinoratidza here kushanda? Uye chii ichi sei kuti akatungamirira chidzitiro? Pano kukupai yksityiskohta ruzivo: Mumwe nemotokari IC vane 16 nembambo, uye kutyaira 16 akatungamirira Chip vatowanda. Kunofambira mberi ngarurege muoti zvinoreva zvose LEDs pamusoro akatungamirira module vari rinosundwa IC chero t ...
Optimum kuona kure
Optimum (zvakanakisisa) kuona daro akatungamirira chidzitiro ndiko kuona kure kupa vateereri pamwe yakanakisisa kuona chiitiko pokuona zvakatungamirira kuratidza chidzitiro uye hapana ruvara vachikanda. Kutaura chokwadi, zvakaoma chaizvo kutsanangura izvi nokuti pane zvakawanda simba zvinhu, dzakadai Pixel kudzikira, SC ...
Chii chiri kuona pakona?
Kuona angled ndiye kunonyanyisa angled panguva iyo chiratidzwa anogona kuonekwa ne zvinogamuchirika kutarisana unongotaura. It hunosanganisira kuona angled uye wehunyambiri kuona angled. The mufananidzo ingaita garbled, taita yakazara, varombo musiyano, blurry kana vaneta kunze waiti kuona yorusvingo siyana, asi ...
Tsanangudzo ingress kudzivirira (egIP65)
Ingress Protection (IP) iri European kureva kuti zvinonyatsorondedzera dhigirii kudzivirira inopiwa ane yakakomberedzwa kuti magetsi. The Rating hurongwa ine tsamba IP achiteverwa nhamba mbiri: nhamba yokutanga inoratidza mwero kudzivirira hwakasimba wokumwe chinhu ingress. T ...
Chii Difference pamusoro SMD usevere?
SMD anonziwo SMT (pamusoro akatasva michina), kuti SMD Mwenje pokunamatidza pamusoro pcb bhodhi pamusoro. SMD akatungamirira kuratidza rinoshandiswa chaizvo indoor zvirongwa. Right zvino rinoshandiswawo nokuda Outdoor zvirongwa. Our makomba SMD akatungamirira anoratidza zviri zvakakwana vakura, IP65 mvura uchapupu pamwe nemakore yokuedzwa. Dip (Dual ...
Kusiyana pakati akatungamirira Display Light Sources
The akatungamirira chiedza bhuku Zvinokosha mashoko akatungamirira akaratidza mabasa, izvo anosarudza ruvara kusachinja-chinja, kupenya, achiona angled uye mutengo chinovhara. Pano kuzozivisa musiyano pakati dot chizvaro, ndokuzvinyika uye SMD akatungamirira chiedza kunobva. 1. tira chizvaro module: Zviri magadzirirwo akare, rakavapo kubva Int ...
Ndicho chiratidzo zvakaoma chirongwa?
Kana bodo. The zvirongwa nokuti Displays dzakawanda kunoitwa pachishandiswa kure ruoko-wakaitwa, hapana kombiyuta kana chinokosha-software kunodiwa. The kure kuzvidzora unoshanda kuti chirongwa kana aongorore chiratidzo kubva kumusoro kusvika 25 tsoka kure. Matafura edu anogona kushandisa kana kure kana nyore kushandisa Software yedu.
Kudzora Renguva ruvara akatungamirira Display Quality?
Akatungamirira zvinoriumba chinonyanya kukosha zvikamu mavara akatungamirira kuratidza. Nokuda kuti, Kusimudzira akatungamirira zvinoumba unhu ndiyo kiyi kuita zvakanaka zvizere ruvara akatungamirira kuratidza. Pane shanu zvinokosha zviratidzi kuongorora hurongwa uhwu: 1) Kukundikana zvazvingava Sezvo zvizere ruvara akatungamirira ratidza comp ...
Chii tsika chakaita kuratidza?
AeroV anogona kupa customized magadzirirwo kugadzira huenderane akasiyana kushandisa-Customized akatungamirira Displays, izvo zvinogona akagadzirirwa maererano vanoda inodzidzisa uye kufunga zvimwe zvinhu kuitira kuti vanogona kuchengetedzwa nyore. Ichokwadi kwerunyararo kunobatsira kuvandudza upenyu zvigadzirwa equi ...
Kwakaita Ratidza Chinovhara Video Wall Billboard , Led Outdoor Advertising Board, Led Display Billboard, Indoor Led Video Wall, Waterproof Led Screen, Seamless Led Video Wall,